१८ हजार भन्दा बढि नेपाली एजेन्टले र को मासिक तलब खान्छन् – Enepal Khabar
१८ हजार भन्दा बढि नेपाली एजेन्टले र को मासिक तलब खान्छन्
र बारे लामो समय देखि अध्ययन गरिरहेका लेखक तथा वुद्धिजिवी डा शास्त्रदत्त पन्तले नेपालमा भारतिय र को ऐजेन्टका रुपमा मासिक तलब खाएर काम गर्ने १८ हजार भन्दा बढि रहेको बताएका छन् । १०० भन्दा बढि पुस्तक लेखेका र विशेष गरेर भारतिय खुुफिया एजेन्सी र भारत निति कै विषयमा , ८, वटा पुस्तक लेखिसकेका पन्तले यो खुलासा गरेका हुन् ।
एपिवन टेलिभिजनको एक अन्तवार्तामा डा. पन्तले नेपालका अधिकास नेता तथा उच्च तहका व्यक्ति नै लामो समयदेखि र को तलब खाने तर चर्को रास्टवादी कुरा गर्ने गरेको खुलासा गरेका हुन् । तर त्यी कोको हुन् भन्ने बारे उनले भन्न चाहेनन् । केहि दिन अघि नेपाली सेनाले सर्वाजनिक गरेको र को एजेन्ट लिस्ट देशका प्रधानमन्त्री देखि नेपाली कलाकार साहित्यकार सम्म संलग्न भएका कुराले सबैलाइ चकित पारेको थियो ।भारतका खुविया एजेन्सीले छिमेकिलाइ कहिल्यै राम्रो बनाउन चाहेन तर आफूले जसरी पनि भारत रास्टको लािग फाइदा पुराउने भूमिका खेल्यो । उसले सधै भारतिय हितलाइ मुख्य आधार बनाएर छिमेकि देखि विश्वका अनेकौ व्यक्तिलाइ प्रयोग गर्ने र बबन्डर मच्चाउने भित्री जाल बुन्छ । यहि र कै भित्रि रणनिती र सुचनाका कारण भारतले बँगालादेश र पाकिस्तान हुदै,भुटान, सिक्किम हुदै नेपाल सम्म भारतले आफ्नो प्रभाव र भित्री शासन गरिरहेको सत्य हामि सबैको सामु स्पस्ट छ ।
र का पांच प्रभुक्त व्यक्ति
भारतीय संचार माध्यम र स्रोत अनुसार र का संसार भरि एजेन्ट छन् । जसले विश्वभरबाट विभिन्न सुचना हरु गोप्य रुपमा भारतलाइ पठाउने गर्छन ।
१९७१ भारतयि खुफिया सस्था र को स्थापना गरिएको बताइन्छ । विशेष गरेर पाकिस्तानबाट पुर्वि पाकिस्तान लाइ छुटाएर बँगालदेश बनाउन सफल भुमिका र कै डिजाइनमा खेलिएको थियो त्यति बेला र खुफिया एजेन्सीको काम रामेश्वर नाथ का ले गरेका थिए । उनी जबहरलाल नेहरुको सुरक्षा लागि खटाइएका थिए । त्यस्तै यो एजेन्सीका सुरुवातका एक हस्ति रविन्द्र कोसित पनि हुन् । उनले उर्दुको भाषा सिकि पाकिस्तानी सेनामा भर्ति भइ ,पाकिस्तान आर्मिका भित्री गतिविधी भारतलाइ दिए । जसको कारण भारतले पाकिस्तानी सेना बारे धेरै सुचना पायो । भारतले उनलाइ निकै बुद्धिमानी एजेन्ट भनेर मानेको थियो ।
त्यस्तै एजेन्सी कै पाच हस्ति मध्येका एक थिए । सरस्वती राजामनि ,उनले पनि र कै मिसन पुरा गर्न अफुलाइ ब्रिटिसमा सेनाका भर्ना गराए र भारतलाइ सुचना दिएर व्रिटिसलाइ असफल बनाएका थिए । अर्का एक एजेन्ट थिए कस्मिर सिँह जसले ३५ बर्ष अध्यारो जेलको कोठामा जीवन काटे । । त्यो बिचमा पाकिस्तानलाइ कुनै पनि जानकारी दिएनन् । तर पाकिस्तान बारे सबै कुरा भारतलाइ खुस्स पठाउथे ।
नेपालमा र को प्रवेश
भारतले आप्mनो निति तथा देशलाइ फाइदा पुराउन लागि हरेक छिमेकि देशमा कुनै न कुनै रुपमा आप्mना एजेन्टलाइ खटाउने गरेको छ पनि विज्ञ पन्तको भनाइ छ । विशेष गरेर नेपालमा र ले सयौ वर्ष देखि सञ्जाल विस्तार गर्न खोजिरहेको थियो । नेपाली काग्रेस भारत पसेपछि उसैसँग र नेपाल भित्रिएको उनको भनाइ छ । भारतले नेपालीलाइ प्रयोग गरेर आफु नदेखिने गरि जहाज अपहरण काण्ड सम्म गरेको छ । सुर्य बहादुर थापालाइ प्रधानमन्त्री बनाएर ड्राइ फुडमा भारतिय हस्तक्ष्ोप स्थापना गरियो भने दक्षिण एशिया मुख्य गरेर भुटान र नेपालको दरबार हत्या काण्डमा पनि र को भुमिका बारे चर्चा हुदै आएको छ । अझै बढि सफल रुपमा नेपालमा माओवादीको युद्ध कालमा प्रवेश गरेको भनिन्छ । त्यतिबेला क्रिश्चियन धर्म र पश्चिमीअरुले अर्बै रुपैया नेपालमा भित्राएका छन् ।
र ले नेपालमा अर्बौ रुपैया विभिन्न बाहनामा खर्च गर्दै आएको छ । भारतले नेपालम सात बर्षमा २२ अर्ब बढि पैसा लगानी गरेका पनि उनको भनाइ छ । यदि नेपालले दुइ वटा अवस्थमा विदेशीले दिएको पैसा लिएमा फाइदा पुग्ने अन्याथा सबै विदेशी कै डिजाइनमा नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा रहने पन्त भनाइ छ ।
विदेशीले सिधै रास्टिय कोषमा जम्मा गरेर,आफ्नो सम्पती अनुसार नेपाली खर्च गर्न पाउन अवस्था भएमा । कित विदेशीले सबै प्राजेक्ट बनाएर तयार गरिसकेपछि नेपाललाइ हस्ताक्षर गरेमा । नत्र अन्य माध्यम तथा डिजाइनमा आएका सयहोग र एनजिओहरुले देशलाइ कदापी हित नहुने उनको तर्क छ
२२ भाद्र २०७४, बिहीबार १२:४२ मा प्रकाशित
“सदाबहार सफल बन्दै सहकारी
बिजुली प्रमुख ज्यु! विजुली का पाेल हुन कि नागरिक मार्ने एम्बुस ?
माके किन चुप छ मोदी भ्रमणको विषयमा ?
आलेख ः डरलाग्दो छ विदेशी भूमिमा नेपाली श्रमिकको मृत्युदर
सडकमा फूलेका एउटा आवाज, अशोक दर्जि,धन विनाको मन ठुलो कि ,मन विनाको धन (भिडिायो सहित)
“इंटरनेटले भत्काएको हाम्रो समाज
राजविराज, १ साउन पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कुशाहामा ट्रकको ठक्करबाट एकजना...... पूरा पढ्नुहोस् »
नेपाल–भारत जल यातायात सञ्चालनका लागि सहमति
काठमाडौँ, ३२ असार नेपाल–भारत जल यातायात सञ्चालनका लागि दुवै पक्षबीच द्विपक्षीय संस्थागत...... पूरा पढ्नुहोस् »
मनकामना केबुलकारले पायो उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र
चितवन, ३२ असार इच्छाकामना गाउँपालिका कुरिनटारस्थित मनकामना केबुलकारले निरन्तर चौँथो वर्ष...... पूरा पढ्नुहोस् »
टोकियो मा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सँग समन्धित बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुँदै
ज्याक खड्का - टोकियो पर्यटनको क्षेत्रमा कार्यरत, अनुसन्धानरत तथा अध्ययनरत नेपालीहरुको...... पूरा पढ्नुहोस् »
प्योङयाङ, ३१ असार आफ्नो देशमाथि लगाउँदै आएको नाकाबन्दी हटाउन उत्तर कोरियाले चीनलाई आग्रह...... पूरा पढ्नुहोस् »
प्रदेश ५ का उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय पुरस्कृत
बुटवल, ३१ असार प्रदेश नं ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा उत्कृष्ट सामुदायिक...... पूरा पढ्नुहोस् »
बझाङ, ३१ असार भिरबाट लडेर आज एक सैनिकको मृत्यु भएको छ । मस्टा गाउँपालिका–६ घर भई हाल संग्राम...... पूरा पढ्नुहोस् »
नेपाल सुतिरहेको छैन ः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, ३१ असार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक विद्रोहको चरण समाप्त भएकाले...... पूरा पढ्नुहोस् »
बागलुङकाे बुर्तिवाङमा जिप दुर्घटना: एक यात्रु बेपत्ता।
सिताराम थापा बागलुङ, चैत्र ३०, बागलुङ जिल्लाकाे ढाेरपाटन नगरपालिका -१, बुर्तिबाङकाे...... पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ, ३० असार अबको दुई दिनसम्म देशको पश्चिमी भेगका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने मौसम...... पूरा पढ्नुहोस् »